QM oo Milaayiin Dollar ku bixineysa nabadda Soomaaliya. - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka QM oo Milaayiin Dollar ku bixineysa nabadda Soomaaliya.
Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in ay Todobaadka soo socda billowdo Sanduuqa dhismaha nabadda ee Soomaaliya, kaasoo ay ku bixi doonto 30 Milyan oo Doollarka Maraykanka ah.
Hawl-galka Qaramada Midoobay ee Taageerada Soomaaliya (UNSOM) ayaa Khamiistii shalay shaaca ka qaaday si loo caawiyo dedaallada nabadeed ee ka jira Soomaaliya in la fulin doono mashaariic ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta Qaranka iyo dhismaha dib u heshiisiinta.
Qaramada Midoobay ayaa taageerayay geeddi-socodka nabadda Soomaaliya tan iyo 2009-kii, isaga oo Sanduuqeeda taakuleyntana uu ku yaboohay ku dhowaan 45 Milyan oo Doollar oo lagu fuliyay mashaariic kala duwan.
Previous articleArsenal oo Roose iyo Guuldaro la isugu daray.
Next articleDHAGEYSO: Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kulan la qaatay Guddiga Hanti soo celinta Qaranka